BlankOn: Iyo Debian-yakavakirwa Indonesian Distribution | Linux Vakapindwa muropa
BlankOn Linux iri Debian-based Linux kugovera kunoitwa muIndonesia. Kugoverwa uku yakagadzirirwa uye yakashandurwa kune zvido zvevashandisi vese MuIndonesia. BlankOn Linux inogadzirwa pachena uye pamwe chete kuti ibudise yakasarudzika distro Linux muIndonesia, kunyanya kune dzidzo, mahofisi nehurumende.
Nokuda kwayo BlankOn Linux yakafunga kuchengetedza tsigiro yeiyo 32-bit kuvaka izvi kuitira kupa sisitimu kune avo vashandisi vachiri kushandisa yakaderera-zviwanikwa zvishandiso, uko makuru makomputa ayo anoramba achichengetedza izvi ndeaya epuraimari dzidzo zviitiko
BlankOn Linux parizvino iri mushanduro yayo yegumi iyo yaakabhabhatidza zita rekodhi "Tambora" (rinova zita regomo muIndonesia).
1.1 Zvinodikanwa zvekuisa BlankOn Linux
Pakati pehunhu hweiyi vhezheni tinoona kuti inoshandisa iyo Linux Kernel 4.6.0-1. Mune iyi vhezheni, iyo Hofisi application inoshandisa iyo LibreOffice application vhezheni 5.1.4.2 inova yazvino vhezheni.
Inosanganisira iyo Gnome Shell desktop nharaunda mune yayo vhezheni 3.20 iyo inosanganisira inovandudzwa rutsigiro rweHiDPI kuratidza uye MultiTouch yekuisa michina, kusanganisira inofamba rutsigiro.
Manokwari inzvimbo yedesktop inoenderana neGNOME shell 3. Yakasanganiswa Gtk + uye HTML5 kumberi (Gtk + inogarwa pano uye yaizotsiviwa zvachose neHTML5 mune ramangwana). Iko kushanduka kweganda rinodaidzwa risina chinhu. Mukuburitswa uku, Manokwari inogamuchira akawanda anovandudza uye akasiyana maficha, anosanganisira akagadziridzwa ekutsvaga mashandiro, kurudyi kwepaneru, yemamiriro ekunze widget, mumhanzi mutambi, uye akanaka mifananidzo. Manokwari paBlankOn Tambora inotsigira yakakwira skrini resolution senge retina kuratidza uye inogona kushandiswa pane 4k kuratidza.
Manokwari ine akati wandei zvinhu, izvo zviri izvo:
Iyi menyu inoyevedza kwazvo inoratidzwa kana iwe ukabaya pakona yekumusoro kuruboshwe, iyo inozotiyeuchidza nezve yekare Gnome 2 menyu asi yakatwasuka, zvakare ine bhokisi rekutsvaga iro rinonyanya kubatsira.
Izvi zvichatiratidza windows nemaitiro ari kushanda, saka chiri chinhu chiri nyore asi chinonyanya kubatsira. Kana iyo pointer ikaramba iri pabhara rebasa, preview yakafanana neGNOME shell taskbar ichaonekwa.
Pano isu tichawana zvakajairika senge iyo nguva, network chiratidzo, chiratidzo cheizwi, chiratidzo chekuisa, chiratidzo chekushandisa uye chaiyo desktop desktop.
Kudivi rerudyi tinowana rimwe bhawa, iro sekutaura kwandakamboita, rakafanana neiro ratingawana muDepin, ndinogona kuti rinobatsirawo nekuti rinotiratidza maapplet ane zviito kumisangano mikuru, senge keyboard uye mbeva, network, tarisisa, dunhu nemutauro pakati pevamwe.
Pazasi iwe unowana yakanaka kwazvo uye yakapusa doko. Kana iwe ukabaya-kurudyi nzira yekushandisa mune inodonhedza menyu pane kuruboshwe pani uye tinya "Wedzera kuDesktop", iyo nzira yekushandisa ichaiswa padoko.
BlankOn X Tambora inoshandisa vhezheni yakashandurwa yeArc GTK theme inotaridzika kunge yakanaka. Pamwe pamwe neakanaka icon theme inonzi Tebu, ini ndoda iyo yakazara iyo BlankOn X mifananidzo. Rakanaka kwazvo basa kune BlankOn crew. BlankOn X Tambora zvakare ine inoyevedza shutdown dialog.
Zvinodikanwa zvekuisa BlankOn Linux
Sekugoverwa uku kwawakaudzwa iwe inogona kumhanya pane yakaderera-zviwanikwa makomputa saka inodikanwa Hardware kuti ishande zvakakwana haina kunyanya kukwirira, isu tinongofanirwa kuva ne:
Imwe 1 GHz CPU
Inenge 15 GB ye hard disk space
Kudhaunirodha uku kugovera tinongofanira kuenda kune yayo yepamutemo webhusaiti uye muchikamu chekurodha tinowana chinongedzo chayo. Ini ndinosiya iyi link pano.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » GNU/Linux » Kugoverwa » BlankOn: A Debian-based Indonesian Distribution
Ini ndakarohwa nedesktop uye kuti iwe unoda kuiisa zvachose ku html5